Speedtest by Ookla အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（28.5MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Speedtest by Ookla
Speedtest app မှစုဆောင်းထားသောအစစ်အမှန်ကမ္ဘာဒေတာအပေါ် အခြေခံ. မိုဘိုင်းကွန်ယက်လွှမ်းခြုံမှုမြေပုံများကိုစူးစမ်းလေ့လာပါ။ မိုဘိုင်းလေယာဉ်တင်သင်္ဘောကွန်ယက်များ0င်ရောက်နိုင်မှုကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
သင်၏အွန်လိုင်းဆက်သွယ်မှုကိုလျှို့ဝှက်ထားပါ။ speedtest vpn ™ဖြင့်လုံခြုံအောင်ထားပါ။ တစ်လလျှင် VPN နှင့် ပတ်သက်. ဒေတာ 2GB အထိဒေတာများကိုအခမဲ့သုံးပါ, သို့မဟုတ်လစဉ်ဒေါ်လာ 4.99 ဒေါ်လာဖြင့်အကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုမှုဖြင့်ပရီမီယံကိုသွားပါ။ Speedtest VPN ပရီမီယံသုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏ကြေးပေးသွင်းခြင်းတက်ကြွနေစဉ်ကြော်ငြာများကိုလည်းလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
သန်းချီသောလူသန်းပေါင်းများစွာသည်အင်တာနက်အမြန်နှုန်းကိုစမ်းသပ်ရန် (1) ခုကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး, BR> - သင်၏ download, upload နှင့် ping
- မိုဘိုင်းလေယာဉ်တင်သင်္ဘော Maps - မိုဘိုင်းလေယာဉ်တင်သင်္ဘောမြေပုံများ - ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ Speedtest VPN နှင့်အတူလုံခြုံစွာနေပါ သင်၏ max resolution နှင့် buffering များကိုတိုင်းတာရန်ဗီဒီယိုစစ်ဆေးမှု
သည် speet speeter ကို download လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆက်သွယ်မှုများစွာကိုကူးယူရန်အတွက်ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုတည်းနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် Symen-textenck
သင်ကတိပေးထားသည့်အရှိန်ကိုဖြေရှင်းရန် (သို့) စစ်ဆေးပါ။ သင်၏ရလဒ်များကိုအလွယ်တကူမျှဝေပါ။ သင်၏ရလဒ်များကိုအလွယ်တကူမျှဝေပါ။ သင်၏ရလဒ်များကိုအလွယ်တကူမျှဝေရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။ https: //www.speedtest ကိုဖတ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။ Net / Privacy
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို https: //www.spee ကိုမရောင်းပါနှင့် dtest.net/about/ccpa
ဘာအသစ်လဲ Speedtest by Ookla 4.7.6